Jilbid - Dareemida laabta - cudurada celiya
Maxay calooshu mar dambe xirantahay?
Waa maxay calaamadaha caadiga ah?
Goorma ayay tahay inaan u tago dhakhtarka?
Daawada sida kicin?
Intee ayey le'eg tahay halista kansarka?
Dad badan ayaa arkay sawirka ka hor: qof u muuqda inuu dabka ku dhufanayo, oo ku xigta cinwaanka "Joonis". Tani waa dabcan sawir qalafsan, sababtoo ah muraayad, iyada oo ay magaceeda tahay, ma laha wax dab la qabadsiiyo ama olol. Halkii, waxaa jira cuncun oo ah xuubka xuubka ee hunguriga ka danbeeya - dareen aan fiicneyn.
Qalafsanaan - Khatar ku ah laabta (cudur-celis)
Ku dhowaad qof kastaa marar badan ayuu la kulmaa. Ilaa iyo inta ay calaamaduhu ka baxayaan saacado keli ah ama ugu yaraan hal ama laba maalmood, ma jirto wax laga walwalo. Si kastaba ha ahaatee, 10 ilaa 15 boqolkiiba dadka ay saameeyeen waxay joojinaysaa gubashada cunaha, si kastaba ha ahaatee.
Jilbada - cudurka cadaadiska
Iyaga, xabada ayaa aad u xoog badan si ay u gubto. Cudurka dib-u-ceshadaynta, oo ka dhalata, waa in lagu daaweeyaa kiis kasta. Inkasta oo uu jiro qulqulo fudud oo aan walwal lahayn: marxalado hor leh oo cudurka ah, iyada oo aan lahayn daaweyn habboon, dhibaatooyin caafimaad oo halis ah - oo ay ku jiraan kansar - hanjabaad.
Jawaabaha soo socda ee su'aalaha ugu muhiimsan ee ku saabsan caawinaadda nacfiyada si looga fogaado kuwa ugu xun.
Sidee dhibaatadu u dhacdaa?
Xididku waa sheyga caloosha. Waxay u adeegtaa si ay udheesho cuntada iyo "dheefshiidka" adoo ukumiiya ukunta. Waxa uu hawshani ku hawlan yahay gacan-ka-helidda enzymes (pepsin) iyo - kaas oo u muuqda wax la yaab leh marka hore - qayb ka mid ah hydrochloric acid.
Cudurka Hydrochloric ee jirkeena? Taasi ma khatar ma aha? Maqnaan ilaa iyo inta uu miirku ku jiro meesha uu ku yaal - caloosha. Inkasta oo pH-ga aadka ah ee 1 ee 3 - taas oo ah boqol jeer celcelis ahaan acidic badan oo khal. - dareeraha dheefshiidka wax dhaawac ah ma jiraan. Iyadoo loo eegayo qaab-dhismeedkooda gaarka ah, derbiyada gudaha ee caloosha si fudud ayaa u dulqaadan kara deegaankani.
Caadi ahaan, sphincter wuxuu hayaa isbedelka u dhexeeya hunguriga iyo caloosha oo si adag loo xiro si aan aashadu uga baxsanin furitaanka sare ee caloosha. Hase yeeshee, hawsha muruqyadaasi way dhibsan kartaa sababta oo ah sababo kala duwan (arag su'aasha soo socota). Natiijo ahaan, waxyaabaha caloosha ku jira waxay u dhexeeyaa hunguriga iyo xanuujinta xajiinta. Tani waa mid la dareemo sida miyir-beeleed.
Sifaha, oo sidoo kale loo yaqaan "sphincter", oo xakameynaya calool-galinta, ayaa ku dhimi kara sababo kala duwan. Marka hore, waa wax aan caadi aheyn, taasina waa sababta ay udubdhexaad uga bilaabanayso 50. Da 'waxay dhacdaa inta badan. Tani waxay badanaa dhacdaa habeenkii, sababtoo ah sphincter u dhexeeya hunguriga iyo caloosha ayaa badanaa seexan inta lagu jiro hurdada. Intaa waxaa dheer, soo-celinta qanjirada ee nacfiga waa la jecelyahay marka uu jiifa.
Xaaladaha kale, jajabka dhafraafiga ah wuxuu keenaa barafka caloosha ee caloosha. Daawada hunguriga ka dibna way lumisaa xiisaddeeda, suufku si fiican uma shaqeeyo. Jardiino badan oo laabatooyinka ah, waxyaabaha ka soo baxa caloosha mararka qaarkood xitaa waxay u soo baxaan qalajinta.
Calaamadaha caadiga ah ee miyir-beelka ayaa ah xag xanuun badan oo gubashada caloosha sare. Xanuunku marmarka qaarkood wuxuu u fidiyaa inuu ka danbeeyo naaska. Caajis ama cabitaan ma wanaajiso dareenka. Laakiin dareenkaasi ma aha mid waajib ah. Xaaladaha qaarkood, dib-u-celinta gastric acid ee cunaha ayaa marka hore bilaabaya wax calaamado ah oo dhan - tani waxay si gaar ah khiyaanaysaa. Haddii ay calaamaduhu soo muuqdaan mar dambe, cudurku wuxuu noqon karaa marxalad sare, taasoo daaweyn adag ku sameynaysa.
Maxay yihiin astaamaha qaliinka?
Gastric acid ee hunguriga mararka qaarkood ayaa keena calaamado aan bukaanku ama dhakhtarku ku wehelin miyir-beeleed. Gaar ahaan dadka dhalinyarada ah ayaa badanaa ka cabanaya xanuunka feedhaha. Haddii dhakhtarradu ay joojiyaan wadne-qabadka wadnaha, dhibaatadu waxay inta badan u muuqataa inay noqoto mid xoqan.
Cudurka qanjidhada ayaa sidoo kale keeni kara qufac joogto ah ama xabeeb, taas oo dhakhaatiirta inta badan ay hore ugu tarjumaan inay yihiin astaamaha calaamadaha qabowga ama neefta. Mararka qaarkood dadka xanuunsanayaa waxay soo sheegaan dareenka jidhka shisheeye ee cirridka.
Xoqitaanka mararka qaarkood iyo gubashada cunaha ma jirto wax walaac ah. Cabashooyin naadir ah cidna ma aha inay tagto dhakhtarka. Waxaa laga yaabaa in ay jirto qaxwad aad u badan, ama cunto culus, dufan badan ayaa sabab u ahaa. Cuntooyinkaas oo kale, caloosha waxay soo saartaa aalado badan. Dareenka aan fiicnayn ee cunaha ayaa badanaaba iskiis u dhaca. Si kastaba ha noqotee, haddii calaamadaha badanaa dhacaan - dhowr jeer toddobaadkii - dadka xanuunsan waa inay la tashadaan takhtar. Qofka qaba joonis dhowr jeer maalintii laba illaa saddex toddobaad ayaa kugula talin doona xasuusin si loo hubiyo xaaladda hunguriga.
Muxuu daaweynta u eg yahay?
Marka hore, waxaa jira dib-u-eegis ku saabsan caadooyinka. Miisaanka jirka miyuu sax yahay? Miyaan u guurayaa si ku filan? Culayska iyo leexashada ayaa kor u qaadi kara miyir-beelka. Sidoo kale taxaddar markaad cabto khamri cad, macmacaan iyo baruur. Haddii shaki laga qabo, waxaa fiican in la sameeyo iyada oo aan. Sidoo kale waxay khuseysaa qaxwada, shaaha madow iyo cabitaanno qudaaraysan. Sigaarku waa waxyeello maxaa yeelay nicotinku wuxuu yaraynayaa quudinta oo nuujinaysa acid caloosha. Inkasta oo caadooyinka isku hagaajin ay ku caawin karaan, badanaa maaha mid ku filan. Xaaladaha noocan oo kale ah, hadda waxaa jira dhowr daawo oo dhakhso ah.
Dhibaatooyinka fudud, daawooyinka cayayaanka ah waxaa la heli karaa (firfircooni: hydrotalcite, Algeldrat, magaldrate, sodium aluminium carbonate) iyo sidoo kale kalsiyum iyo magnesium carbonate. Diyaargarowga ka mid ah ranitidiin ama famotidine waxay joojinaysaa sameysashada gastric acid. Haddii jirro dhaqdhaqaaqa caloosha uu sabab u yahay, daawooyinka dhirta oo leh dabeecad qashin ah, caraway, gentian iyo qadhaadh candida oo qadhaadh ah. Xaaladaha daran ee dhakhaatiirtu waxay qoraan daroogooyinka ka yimaada fasalka korontada mashiinka proton. Waxay ku xakameynayaan abuurista aashitada ugu fiican, laakiin si dhakhso ah uma shaqayn.
Sumeeyayaasha qaarkood waxay keenaan murqaha isgoysyada si ay ugu nastaan ​​gelitaanka caloosha, waxay fududeyneysaa waxyaabaha lagu garto qanjidhada kaadida ee hunguriga. Kuwaas waxaa ka mid ah neefta gaarka ah, dawooyinka wadnaha iyo dhiig karka. Sidoo kale, qaar ka mid ah xannibaadayaasha dhiigga ee calcium iyo antidepressant ayaa yeelan kara saameyn taban. Si kastaba ha noqotee, bukaanku waa inaysan sameynin iyada oo aan la isticmaalin daawooyinkooda - taasi waxay noqon kartaa halis nolosha. Dadka qaba cudurrada jooniska waa inay marka hore la hadlaan dhakhtarkooda.
Hawlgalku ma yahay mid waxtar leh?
Haddii qof qabo miyir-qabsigu uusan rabin inuu qaato wax daawo ah, haddii uusan u dulqaadaneynin ama haddii aysan wax saameyn ah ku yeelan, dhakhaatiirtu badanaa waxay ku caawin karaan qalliinka. Hawlgalkan oo kale waxaa loo yaqaan "fundoplication". Qaliinka ka soo baxa unugyada caloosha gudaha ee caloosha ayaa ah cuff, taasoo ay ku hareereysey kala-guurka hunguriga ilaa caloosha. Ciriiriga soo-baxa wuxuu keenayaa marinka suufka si uu si fiican u shaqeeyo. Bukaanjiifka badankood waxay ku nool yihiin wax aan habooneyn kadib qaliinka. Marka laga soo tago dhibaatooyinka caadiga ah ee raaci kara qaliinka (caabuqa, bogsashada nabarrada oo liita), habsocodku waa amaan (haddii uu sameeyo dhakhtar khibrad leh).
Qiyaastii boqolkiiba 10 dadka qaba cudur-celis, waxaa jira isbeddel dheecaan ah ee hunguriga. Kuwani waa hormarayaasha kansarka, dhakhtarrada ku hadlaya "Barrett's syndrome". Badanka bukaankan ayaa la saameeyaa, kuwaas oo cudurkeenaha dib-u-soocelinta uu sameeyay goor dambe ama aan hore loo arag. Xitaa marxaladdan, dhakhaatiirtu si wanaagsan ayey u daaweyn karaan - iyada oo la ogaadey in bukaanku wakhtigiisii ​​la socdo cabashooyinkooda.
Tani had iyo jeer ma aha kiiska, markaa mararka qaarkood kansar run ah ayaa ka soo baxa ka hor. Caadi ahaan sida foosha oo kale ah ayaa marka hore lagu xaddidan yahay. Marka hore la ogaado, dhakhaatiirta qaliinka badanaa waxay maareynayaan in ay ka saaraan unugyada kansarka adigoo isticmaalaya hababka endoscopic. Waa muhiim inaad si dhow ula socoto xaaladda hunguriga ee bukaanka sida ka dib waxqabadka. Haddii uu guuleysto, dhibaatooyin daran ayaa dhif ah.
Xanuun Dhexe Dhexe | Daawada caafimaadka